बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पनि प्रदर्शनी रहने | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पनि प्रदर्शनी रहने
on: December 21, 2018 अन्तरवार्ता
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पनि प्रदर्शनी रहने
कोमल पोखरेल, कार्यकारिणी सदस्य प्रवक्ता, नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ
मेलाको तयारी र व्यवस्थापनबारे बताइदिनुस् न ?
संघको कार्यसमिति बैठकले १ वर्षअगाडि नै मेला गर्ने भनी पारित गरेको थियो । त्यसपछि हामीले मेलाको तयारी ३ महीनाअगाडि शुरू गर्‍यौं । अहिले मेलाको व्यवस्थापन र मूल आयोजक समिति गठन गरेका छौं । साथै, विभिन्न उपसमिति पनि बनाएका छौं । मूल आयोजक समितिले पहिलो चरणमा स्टलको बुकिङ खुला गर्‍यो । स्टल बुकिङमा अघिल्लो पटक मेलामा उपस्थित भएकालाई खबर गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, संघको वेबसाइटमा सूचना राख्ने र विभिन्न पत्रपत्रिकामा सूचना गर्ने काम भएका छन् ।
त्यस्तै, मेलामा कस्ता प्रकारका सामान प्रदर्शन गर्ने, कस्ता वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नेजस्ता विषयअनुरूप हामी अगाडि बढेका छौं । स्टलको आकृतिअनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि मुख्य प्रायोजक र प्रायोजकको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । त्यसपछि स्टल राख्ने व्यक्तिका लागि अहिले ५२ ओटा प्याविलियन र २६ ओटा स्टल व्यवस्था गरेका छौं । अहिले भनेको मेलामा हाम्रो उपस्थिति कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने छ ।
मेलामा कस्ता सामग्रीको प्रदर्शनी गरिँदै छ ?
मुख्यतया मेलामा इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिक वस्तुको प्रदर्शनी हुन्छ । त्यससँगै अल्टरनेटिभ इनर्जी, सोलार इनर्जीलगायत विद्युतीय सामग्रीसम्बन्धी नेपालमा उत्पादन हुने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रदर्शनी रहन्छ ।
मेला अवलोकन गर्न कस्ता व्यक्ति आउन जरुरी छ ?
२ वर्षअगाडि आयोजना गरेको मेला र अहिले आयोजना गरिएको मेलामा विद्युत्सँग सम्बन्धित नयाँ प्रविधि के के आए भनेर रुचि राख्ने सबै आउनुपर्छ । विश्वमा के कस्ता सामान उत्पादन भए भनेर जिज्ञासा राख्ने इन्जिनियर, विद्यार्थी, सर्वसाधारण, आम उपभोक्ता सबै आउन जरुरी छ । मेलामा विद्युतीय सामग्री जडान गरिदिने इन्जिनियर, नगरपालिका, महानगरपालिका र त्यहाँका प्राविधिक आउनुपर्छ । त्यस्तै, मेलामा विद्युत्सँग सम्बन्धित व्यापारीको त उपस्थिति अनिवार्य नै छ ।
मेलामा आएर लिन सकिने फाइदा नि ?
उत्पादक, प्रदर्शक, व्यवसायी, आम उपभोक्ता, विद्युत्सँग सम्बन्धित इन्जिनियर, विद्युतीय प्राविधिक सबै एकै ठाउँमा संयोजन हुने भएकाले सबै विद्युत्सँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई मेला अवलोकनले फाइदा हुन्छ । मेलामा दिउँसो १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म कार्यशाला गोष्ठी पनि आयोजना हुन्छ । जसमा सम्बन्धित सबैले विद्युत्बारे जानकारी पाउँछन् । यसबाट कस्ता ठाउँमा कस्तो सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिन सकिन्छ । साथै उपभोक्तालाई सेफ्टी कसरी अपनाउने भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिइन्छ ।
मेलामा प्रवेश शुल्कको व्यवस्था कस्तो छ ?
मेलामा हामीले साधारण नागरिकलाई १ सय र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैयाँ शुल्क लगाएका छौं । यसमा पत्रकारलाई परिचयपत्र देखाएर निःशुल्क प्रवेश दिइनेछ । त्यस्तै, भीआईपी र अन्यलाई महासंघले तोकेअनुसार निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ ।
मेलाको स्टल, सामान विक्री र छूटबारे पनि बताइदिनुस् न ?
प्याभिलियन प्रकृतिका ५१ ब्लक र बाहिर २६ ओटा स्टल रहेका छन् । केही स्टलमा विक्री गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विक्रीका लागि राखिएका सामग्रीमा कम्पनीहरूले छूटको पनि व्यवस्था गरेका छन् ।
अवलोकनकर्तालाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो २/२ वर्षमा लाग्ने मेला भएकाले आम उपभोक्ता, प्राविधिक, नीतिनिर्माता, पत्रकारलगायत सबैलाई मेला अवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु । साथै, सुझाव र कमीकमजोरी औंल्याइदिन अपेक्षा गर्दछु ।
प्रादेशिक संरचना विस्तार गर्दै नाफिज, नविन ढुंगानाको नेतृत्वमा प्रदेश–३ कमिटी गठन
एक सातामा २३.९६ अंक बढ्यो नेप्से, परिसूचक बढ्दा पनि कारोबार रकम भने घट्यो
तस्वीर : बैंक स्थापना गर्न हेलिकप्टरबाट सामग्री ढुवानी
वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व असुलीमा १९ प्रतिशतले कमी
व्यवसायीले भने : भीसीटीएसबारे राज्य नै पूर्ण जानकार छैन, हामीले कसरी अभ्यासमा ल्याउन सक्छौं ?
दश वर्षसम्म अलपत्र पुल एघार महिनामै सम्पन्न
आईसीसीको निलम्बन : नेपाल क्रिकेट संघ यथावत्, क्रोएशिया र जाम्बिया थपिए, जिम्बावेलाई प्रतिबन्ध
अमेरिकामा बेरोजगार भत्ता दाबी गर्नेहरुको संख्या सामान्य बढ्यो
सडक पुगे पनि हवाई यात्रामा थेगी नसक्नुको चाप
कञ्चनपुरमा १ अर्ब ७१ करोड बजेट फ्रिज